Sida loo hagaagsan iCloud Xiriirada in ay Android
2 Siyaabo Sahlan ee Suuqa iCloud Xiriirada in ay Android
Waa wax fudud in la iska ilaawaan aalad Android u iPhone ah, sababtoo ah suuqa kala iibsiga xogta waa iska sahlan. Tusaale ahaan, waxaad kartaa ka Android inay iPhone wareejiyo xiriirada si fudud. Si kastaba ha ahaatee, marka la wareegaya ka iPhone in Android, waa in si sahlan kuma, xogta on iPhone waxaa lagu hayaa iPhone laftiisa, Lugood ama iCloud. Haddii aad rabto in aad u hagaagsan iCloud xiriirada si Android phone, waa in aad bartaan qaar ka mid ah Talooyin iyo tabaha. Haddii kale, aad ku guul dareysato doonaa si ay u helaan xiriirada ka iCloud in Android. Si kastaba, ha ka welwelin! Waxyaabaha soo socda ayaa aad barayaa 2 habka ugu isticmaalay si ballaaran si ay u gudbiyaan xiriirada ka iCloud in Android. Dooro sida in ay xaq kuu:
Xalka 1. Si toos ah Suuqa iCloud Xiriirada in ay Android Phones (sahlan iyo Xalka dhaqsaha badan)
Xalka 2. dhoofinta iCloud Xiriirada> Import dhoofiyo Xiriirada in ay Android Phone (Talaabooyinka More iyo ka dheeraado in ay sameeyaan)
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baddashaan phone cusub kaliya, waxaa laga yaabaa inaad xiiseynaya sida loo Mudanayaasha telefoonka cusub, nuqul xog ka phone hore si telefoonka cusub, iyo waxa la sameeyo leh telefoonka jir. Waxaad kartaa halkan ka fiiri faahfaahinta >>
Haddii aad rabto in aad hesho xiriir ka iCloud qalabka Android si toos ah, waxaa loo baahan yahay qalab, sababtoo ah waxaa jira hab gacanta lagu heli karaa in la sameeyo in jirin. Halkan qalab xoog leh lagula taliyey waa Wondershare MobileTrans, kaas oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u gudbiyaan xogta ku dhowaad meel kasta si ay u casriga ah.
Wondershare MobileTrans - nidaameed iCloud Xiriirada la Android
4 tallaabooyinkan fudud si aad u hagaagsan iCloud Xiriirada la Phones Android toos ah
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare MobileTrans
Riix badhanka download hoos ku qoran si aad u hesho xirmo rakibo Wondershare MobileTrans on your computer. Ka dib ka dibna raac saaxir ah si loo soo dajiyo oo abuurtaan. Isticmaal USB phone cable digital Android in ay ku xidhmaan aad telefoon kula your computer.
Tallaabada 2. Aayad in iCloud
In uu furmo suuqa ugu weyn ee MobileTrans, guji meesha midab cagaar ah - Soo Celinta ka hayaan. Markaas riix "iCloud". In uu furmo suuqa cusub ee la soo dhisay dabamariyay, aad looga baahan yahay inay la soo wareegto in iCloud. Just ku qor in aad xisaabta iCloud. Ha welwelin ku saabsan ammaanka xisaabtaada iCloud. Wondershare Marnaba ururiyaan mid ka mid ah macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxa keliya oo kaa caawinaysaa in aad kala soo bixi iCloud faylka gurmad ay ku jiraan xiriirrada aad u baahan tahay.
Fiiro gaar ah: inta aysan qaadan in aan xoojinno 2, waa in aad marka hore hubi in aad xoojiyaa xiriirada aad ka qalab macruufka ah in iCloud (Settings tuubada> iCloud> kaabta> awood "kaabta iCloud" hormariyo "Back Up Hadda")
Tallaabada 3. Download kaabta iCloud File
Marka aad gasho la account iCloud, waxaad arki kartaa dhammaan dambeeyay iCloud files gurmad ee dhinaca bidix ee suuqa kala. Dooro mid ka mid ah ay ku jiraan oo dhan xiriirada aad rabto in aad nuqul ka si phone Android oo double-riix. Marka ogeysiis soo booda, weydiinaya in aad file gurmad ah, riix "Download" laga bilaabi karo habka dajinta.
Tallaabada 4. Transfer Xiriirada ka iCloud in Android
Ka dib markii ay soo degsado gurmad iCloud faylka, Wondershare MobileTrans Siibnaa oo dhan xiriirada ka gurmad iCloud faylka aad u. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in lagu eego "Xiriirada" doorasho dhexe ee suuqa kala guji "Ka bilow Copy". Taasi waa!
Xalka 2. dhoofinta iCloud Xiriirada> Import dhoofiyo Xiriirada in ay Android Phone (ka adag oo waqti dheer si ay u sameeyaan)
Haddii aad si fiican oo ku saabsan iCloud ogaado, waa in aad ogtahay in xiriirada in iCloud dhoofin karo sida file vCard ah. Iyo file vCard wuxuu noqon karaa dejinta in qalab kasta oo Android. Taasi waa sida xal 2 baxa: xiriirada dhoofinta iCloud ugu horeysay, ka dibna dajiyaan xiriirada si Android. Aan ku bartaan sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. nidaameed Xiriirada in iCloud
Marka hore oo inta badan ka, hubi in aad synced xiriirada si iCloud. Haddii aan, raac tilmaanta si ay u hagaagsan xiriirada ka qalab macruufka in iCloud: Settings tuubada> iCloud> saxiixa in la xisaabtaada iCloud> dadban "Xiriirada" in ON.
Tallaabada 2. dhoofinta Xiriirada ka iCloud sida File vCard ah
Www.icloud.com Open in browser web on your computer ah. Saxiix in la xisaabtaada iCloud oo guji "Xiriirada". In guddi gacanta u xiriirada, waxaa jira a marsho icon yar bidix ee hoose. Waxaa Click iyo dooran "Dhoofinta vCard" inaad kala soo baxdo xiriir ah.
Tallaabada 3. Import iCloud Xiriirada in kaarka SD Android
Connect telefoonka aad Android la your computer via cable USB ah. Card SD Its oo loo aqoonsan doono drive ah by your computer. Fur "My Computer" ama "Computer" si aad u hesho oo la furo. Koobiyee iyo faylka vCard keeno paste, waxa uu.
Tallaabada 4. Import iCloud Xiriirada in Device Android Xiriirada Book
Tubada iyo furo app Xiriirada telefoonka aad Android. Tubada icon menu tagay si badhanka weyn oo waxaad heli doontaa liiska. Dooro "Import / Dhoofinta" iyo dooran "Import ka kaydinta USB". Marka aan sidaa yeelno, dhammaan dadka ay khuseyso in file vCard la soo guuriyeen doonaa in aad buug Xiriirada.
More Articles laga yaabaa inaad ku saabsan Android oo iPhone
Software File Transfer Android aad ka ogaato
Music Nuqul ka Lugood in Android
Xiriirada kala iibsiga ka Sony si iPhone
Apps ka Android wareejiyo Android
> Resource > iCloud > Sidee si ay u gudbiyaan iCloud Xiriirada in ay Android